Reasons कारण कागज किताबहरू पढ्न वर्तमान साहित्य
Reasons कारण कागज पुस्तकहरू पढ्न
यद्यपि हामी मध्ये धेरैले सुरुमा सोच्न थाल्छ कि ईबुकले कागजको किताब भन्दा कम प्रदूषित गर्छ, जस्तै अध्ययन "रूख, ग्रह, कागज"स्प्यानिश एसोसिएसन अफ पल्प एण्ड पेपर म्यानुफ्याक्चरर्सद्वारा गरिएको एउटा कागज पत्रिकाले इन्टरनेटमा 30० मिनेट भन्दा कम पढ्ने प्रदूषण गरेको कुराको पुष्टि गर्छ। रोयल संस्थान स्विडेनको टेक्नोलोजी एन 2007।
जे होस् म यो सोच्न को लागी भूल हुन सक्छ कि कहिले काहिं केहि अध्ययनहरु फरक पर्दछ जब यो साझा गर्ने कुरा आउँछ Reasons कारण कागज पुस्तकहरू पढ्न.
1 उसको गन्ध
2 एकाग्रता सुधार
3 तपाईं उधारो दिन सक्नुहुन्छ
4 रेखांकित को कला
5 तिनीहरूसँग ब्याट्री छैन
थोरै अनुभूतिहरूलाई तुलना गर्न सकिन्छ जुन हामी अनुभव गर्छौं जब हामी एउटा पुस्तक खोल्छौं र त्यो गन्धले हामीलाई बाल्यावस्थाको कुनै स्थानमा, समयसमेत, बाहिर जान्छ। पृष्ठहरूको बीचमा नयाँ सामग्रीको गन्ध, पुरानो, एउटा सानो खुशीको कुरा जुन हामी मध्ये धेरैले आज पनि प्रचार गर्छौं जुन हामी पुरानो पुस्तकालयमा पुग्छौं वा हाम्रो पुस्तक पसलमा सब भन्दा प्रिय शेल्फमा भण्डार गरिएका पुस्तकहरू खोल्दछौं।
डिजिटल युगमा जन्मिएका व्यक्तिहरूले कागजमा पढ्ने वा यसलाई डिजिटल रूपमा गर्नेमा कम भिन्नता फेला पार्न सक्दछन्। यद्यपि हामी मध्ये जो सधै कागजमा पढ्छौं ती कच्चा पानाहरूमा हाइपरलिks्कहरू र अलमल्याउने कुराहरू भन्दा बढी सहज महसुस गर्न जारी राख्छन्। त्यस्ता अध्ययनहरू द्वारा उत्पीडन गरिएको तथ्य नाओमी ब्यारन, स्क्रिनमा स्क्रिनको पुस्तकका लेखक: डिजिटल संसारमा पढाइको गन्तव्य, जसमा 94००% सहभागी विश्वविद्यालयका students%% विद्यार्थीले यो पुष्टि गरे कि तिनीहरू कागजातमा डिजिटल ढाँचामा भन्दा ध्यान केन्द्रित गर्छन्।
तपाईं उधारो दिन सक्नुहुन्छ
हाम्रा पुर्खाहरूले कति पुस्तकहरू पढेका छैनौं? कति जना पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा आएका छैनन्? र एक राम्रो मित्रले तपाईंलाई उधारो दिन्छ जब तपाईं नराम्रो समयबाट गुज्रिरहनु भएको थियो? कागज पुस्तकहरू साझा गर्न, उधारो दिन कथाको ब्रह्माण्ड जगाउँदछ। समयको अन्तरालमा तिनीहरूलाई निजी खजाने बनाउनुहोस्।
रेखांकित को कला
हामीमध्ये धेरै जना पेन्सिल प्रयोग गर्न थाल्छौं जब हामी कुनै पुस्तक पढ्न थाल्दछौं। मेरो केसमा, म यी वाक्यांशहरूलाई रेखांकित गर्दछु जसले मलाई नयाँ कथाहरू सिर्जना गर्न हौसला प्रदान गर्दछ, उद्धरणहरू कठिन क्षणहरूमा वा फेरि सम्झनको लागि उद्धरणहरू जुन तपाईंलाई प्रेममा पर्दछ, तपाईंलाई यात्रा गर्न र पाठ प्रदान गर्दछ। र हामी सबैलाई थाहा छ कि पुस्तक खोल्ने र ती सबै एनोटेशनहरू समय बित्दै जाँदा फेला पार्ने काम एभर्नोटसँग कमै हुँदैन, न त प्याडिंग जुन तपाइँ वर्डको कुनै वाक्यांशमा यसलाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूसँग ब्याट्री छैन
इलेक्ट्रोनिक पुस्तकका धेरै फाइदाहरू छन्। वास्तवमा, यस समीक्षालाई अभिव्यक्त गर्ने यस नयाँ तरिकालाई अवरोधक बनाउने उद्देश्यले गरिएको छैन। तर तपाईं यसलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न, ईबुक विपरीत, कागज पुस्तकलाई ब्याट्री वा वाइफाइ चाहिन्छन त बाह्य उर्जाको अन्य कुनै स्रोतबाट यस पुस्तकलाई एक व्यक्तिगत साथी बनाउने जारी राख्ने हाम्रो संसारको सबैभन्दा हराएको स्थानमा वरिपरि बोक्न र उपभोग गर्न जारी राख्नु हो।
के तपाई कागज किताब वा ईबुक पढ्न चाहानुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » Reasons कारण कागज पुस्तकहरू पढ्न
इजरायल डे ला रोजा भन्यो
कागजमा, पक्कै पनि। र हो, पुस्तकहरू। तर वास्तविक पुस्तकहरु। त्यो भिक्टर ह्यूगो पढ्ने कुनै पनि साधारण समकालीन कथा पढेर समान छैन।
इजरायल डे ला रोजालाई जवाफ दिनुहोस्
कसरी तपाईंको टिप्पणी skew। हालको सबै कुरा मध्यम छैन र भिक्टर ह्युगोले लेखेका सबै कलाको काम होइन।
ईनोलालाई जवाफ दिनुहोस्
डिएगो डेल्टेल भन्यो
तिमी सही छौ। हालको सबै कुरा मध्यम छैन। धेरै जसो अशिक्षित लेखकहरूले लेखेका पुस्तकहरू हुन्।
डिएगो डेल्टेललाई जवाफ दिनुहोस्
सुसाना गार्सिया भन्यो
कागजमा बुक! सँधै! कुनै पनि चीज तपाईको हातमा भएको किताबसँग तुलना गर्दैन, पाना विभाजकको विचार, यसलाई खोल्दै र पठनमा फर्केर जाँदा, पानामा अल्झिएको तपाईंको आफ्नै साहसिक कार्यमा डिलिभ गर्नुहोस्!
सुसाना गार्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
म दुबैमा पढ्छु, तर कागजमा मैले फेरि पढ्न मनपराउँछु।
म सँधै कागजमा रुचाउँछु, तर मँ बुझ्छु कि इलेक्ट्रोनिक यात्रा गर्न बढी सहज छ
M-carmen लाई जवाफ दिनुहोस्
मर्लिन कामाचो भन्यो
म विश्वास गर्न सक्दिन कि यो भर्खरको लेख हो। तपाइँ कसरी आफ्नो फाइदा लाईन रेखांकित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईले कस्तो ई-बुक ढाँचा प्रयोग गर्नुभयो? केवल पीडीएफ?
मैले एउटा किन्डलमा पढेको छु र पक्कै पनि म पूरै अंशहरू, वाक्यांशहरू, वाक्यहरू र अनुच्छेदहरूलाई रेखांकित गर्न सक्छु। म तिनीहरूलाई रेखांकित गर्न सक्दछु र उनीहरूमा नोट थप्न, तिनीहरूलाई रेखांकित गर्न र सामाजिक मिडियामा साझा गर्न, वा केवल प्रतिलिपि गरेर टाँस्न। वास्तवमा, किन्डलले सबै हाइलाइटहरूसहित कागजात उत्पन्न गर्दछ जुन तपाईंले पढ्नुहुने सबै पुस्तकहरूको बनाउनुहुन्छ र तपाईं त्यो कागजात पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ र प्रतिलिपि गर्न वा साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंले उल्लेख गर्नु भएको अर्को फाइदा "उधारो दिन सकिन्छ" म गएको छु र गम्भीरतापूर्वक सोध्छु? कम्तिमा अमेजनले पुस्तकहरू ndingण दिने सम्भावना प्रदान गर्दछ जुन तपाईं कानूनी रूपमा कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई खरीद गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग एउटा किन्डल हुनुपर्दैन, केवल एउटा खाता अमेजनमा छ र तपाईंको पीसी, ट्याबलेट, स्मार्टफोनमा किन्डल अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहोस्, र उत्तम कुरा यो हो कि म पक्का छु कि म तिनीहरू फर्किने छन् किनभने अमेजनले स्थापना समयमै यसलाई फिर्ता लिने ध्यान राख्छ (जुन मलाई लाग्छ एक महिना वा १ days दिन हो)
र "उनीहरूको ब्याट्री छैन" को बारे मा तपाई सहि हुनुहुन्छ, हैन! अनि त्यो? यदि मैले मेरो किन्डल लिएँ र मैले त्यहाँ धेरै पुस्तकहरू डाउनलोड गरें भने, म पढ्छु वा पढेको कुराबाट म झन् बोरिन्छु, म अर्को र अर्को खोल्छु र त्यो त्यस्तै हो। जबकि म कागजमा लिन्छु र यसले मलाई बोर गर्दछ वा म यो समाप्त गर्छु, मैले घर फर्कने कुर्नु पर्दछ।
म पढ्न वाइ-फाइसँग जोडिएको हुनुपर्दैन, यसलाई डाउनलोड गर्न र ई-पाठकहरूको लामो ब्याट्री जीवन हुन्छ, जो लामो समयसम्म चल्दैनन् तिनीहरू ट्याबलेट हुन्।
केवल म तपाईंलाई चीज प्रदान गर्दछु कि तिनीहरूमा "गन्ध छ।" तर हामीलाई के अलग गर्छ भनेर खोज्न रोक्नुहोस् र हामीलाई एकतामा राख्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। त्यहाँ धेरै फाइदाहरू छन् कि डिजिटल पढाइको हो। र के तपाईंलाई सबैभन्दा राम्रो छ के थाहा छ? त्यो ई-बुक ठूलो भाई होइन जो ईर्ष्यालु हुन्छ र विस्थापित भएकोमा डराउँछ।
मार्लिन कामाचोलाई जवाफ दिनुहोस्
कार्ल केन्ट भन्यो
मेरो भौतिक पुस्तकालय amounts,5.347 पुस्तकको बराबर छ। मसँग धेरै कोठाहरू र दर्जनौं तखताहरूमा म जान्दछु भन्दा धेरै पुस्तकालयहरू भन्दा बढी छ। र तिनीहरू सबै वास्तविक पुस्तकहरू हुन्, उत्कृष्ट। जे होस्, त्यो नम्बर १% पुस्तकहरू पनि छैनन् जुन मसँग विभिन्न डिजिटल ढाँचामा छ। डिजिटल ढाँचाको ठूलो फाइदा भनेको स्पेसको बचत हो ... सबै कुरा एक साधारण १ टेराबाइट युएसबीमा फिट हुन्छ।
कार्ल केन्टलाई जवाफ दिनुहोस्
ऑस्कर डन्टे इरुटिया भन्यो
निस्सन्देह, पुस्तक अझ व्यावहारिक छ। कमसेकम पुरानो साहित्य प्रेमीहरूको लागि। म विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक संस्करण संग वैकल्पिक, मेरो पारंपरिक युवा पुस्तकालय को लागी - जहाँ म सँधै पछाडि दगुर्छु - मैले डिजिटल को फाइदाहरु को लागी धन्यवाद यो पूरा गर्दै थिएँ। जे भए पनि, इतिहासले हामीलाई सिकाएझैं यी दुई ढाँचा धेरै लामो समय सम्म मिलेर बस्छन्। हामीले फाइदा लिन र बहसलाई समर्थनमा नभई सामग्रीमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ: पदोन्नति, उत्तेजक, प्रचार गर्ने र मुक्त पार्ने ब्रह्माण्डलाई पढ्ने भनिन्छ।
ऑस्कर डन्टे इरुटियालाई जवाफ दिनुहोस्
सिंहासनको_गमन। जोन स्नो के पढ्छ? किट Harington संग विशेष
एमिली ब्रोन्टे द्वारा Ather अनुहार क्याथरिन ईर्नशाउ र हीथक्लिफको लागि